1 taona 5 volana lasa izay #686 by Bobpa567
I vao mihazakazaka ny farany Fort Wayne Int Airport installer.into ny fampirimana ny tenako. Izaho dia hamindra ny toerana manodidina / mihasimba ny Addons ny fampirimana. Amin'ity tranga ity fa hitako fa lahatahiry roa dia nohariana ho (1) fort_wayne_intl_airport_fsx sy (2) fort_wayne_intl_airport_fsx_part2. Ahoana no fomba hiatrehana ny Part2 fampirimana. Moa ve izy ireo ho toy ny hoe natambatra part2 dia fanavaozam-baovao sy ny antontan-taratasy tany am-boalohany overwriting.
Izay mety ho fanampiana be mankasitraka!
1 taona 5 volana lasa izay #687 by rikoooo
Nahoana no tianao ny hametraka ny toerana manodidina tanana? Ny Auto-installer afaka handamina ny asa mifanaraka isaky ny simulators.
"Fort_wayne_intl_airport_fsx" tonga amin'ny toerana voalohany, sy ny "fort_wayne_intl_airport_fsx_part2" tonga amin'ny toerana faharoa ao amin'ny toerana tsara tarehy FSX trano famakiam-boky.
Raha te-hametraka tanana io toerana manodidina ianao mba hahafahan'ny roa avy amin'ny toerana manodidina lahatahiry fitehirizam-boky.
1 taona 5 volana lasa izay #689 by Bobpa567
Misaotra noho ny info. Ny antony Aleoko hanao ny boky hametraka izany. Manana SDD vita fanoloran-tena noho ny Adaona toerana tsara tarehy ary tsy tiako ny hametraka toerana manodidina installers raki-daza eo amin'ny SSD izay manana Win 10 eo amboniny. I iray tsy manam-pahaizana, fa manaraka fotsiny torohevitra nomena tao amin'ny sehatra fiadian-kevitra hafa sns
Voarara: mba hametraka attachements.
Fotoana mamorona pejy: 1.631 segondra